खाने हैन त चुच्चेखोला-गैरिगाँउको स्वादिलो खुवा ? - HarekKhabar.com
खाने हैन त चुच्चेखोला-गैरिगाँउको स्वादिलो खुवा ?
दशैंको नवमीको दिनमा पनि हेटौडा उपमहानगरपालिका १७ गैरीगाँउका माधब प्रसाद घिमिरे खुवा घोट्नमै ब्यस्त थिए ।
बिगत १६ बर्ष देखिको उनको दैनिकी फेरिएको छैन, बरु यहि दैनिकीले फेरिएको छ उनको आर्थीक अवस्था । सामान्य कृषीकर्म गरिरहेका घिमिरेको परिवार दैनिक १०० लिटर दुध घोट्छन् र २५ केजि खुवा घोट्नु र ति खुवालाई खान आउने ग्राहकलाई तातात्तो खुवा खुवाउने मात्र हैन, बनेका खुवा बिरगन्ज, काठमाण्डौं देखि मोतियारी तथा पटना सम्म पठाउनु उनको कार्य हो । माधब भन्छन् ”मासिक ६० हजार देखि १ लाख सम्म कमाउन सकेको छु, खुवा घोटेरै छोराहरुलाइ काठमाण्डौं राखेर पढाउन सकेको छु, खुशी छु ।”
माधब घिमिरे जस्तै गैरिगाँउमा माधव देवकोटा तथा माधवी देवकोटाको जोडी पनि आफ्ना सपरिवार खुवा घोट्ने व्यवसायमै १० बर्ष देखि सक्रिय छन् । उनको परिवारको पनि आर्थिक समृपटना सम्म पठाउनु उनको कार्य हो । माधब भन्छन् मासिक ६० हजार देखि १ लाख सम्म कमाउन सकेको छु, खुवा घोटेरै छोराहरुलाइ काठमाण्डौं राखेर पढाउन सकेकोछु, खुशी छु ।
माधब घिमिरे जस्तै गैरिगाँउमा माधव देवकोटा तथा माधवी देवकोटाको जोडी पनि आफ्ना सपरिवार खुवा घोट्ने व्यवसायमै १० बर्ष देखि सक्रिय छन् । उनको परिवारको पनि आर्थिक समृद्धीको आधार नै यहि व्यवसाय बनेको छ । माधवी भन्छिन्, ”सबै खटेका छौं, निरन्तरताको प्रतिफल स्वरुप एउटा पक्का घर समेत जोड्न सफल भएको छौं ‘ । उनका १८ बर्षका छोराले व्यवसाय सबै धानेका छन् । उनिहरुको मेहनतले मिठाईमा खुवा भरिएको छ ।
गैरिगाँउ नपुग्दै चुच्चेखोला बजारलाई त अझ खुवा बजार भनेपनि हुन्छ । करिव आधा दर्जन खुवा पसलहरु बिगत २०–२५ बर्ष देखि निरन्तररुपमा चलिरहेका छन् । बजार खुवाकै लागि प्रसिद्ध छ । दशैंका बिचमा पनि खुवा लिनका लागि आएका हेटौडाका सुदर्शन श्रेष्ठ भन्छन्, यहाँको खुवा गज्जबको छ, त्यही भएर म प्राय सबै चाडबाडमा यहि आउछु । सामान्य लगानीमा हुने यो व्यवसायले परिवारको आयआर्जन त बढेको छ नै, कृषी व्यवसायलाई समेत मलजल गर्दै स्थानिय परिकारले अन्तराष्टीय बजारमा समेत यसको माग भै आएको छ ।